मनोरञ्जन – Page3– Gokarneshwor Online News
काठमाडौँ – निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को प्रोमो रिलिज भएको छ । मंगलबार आयोजना गरिएको प्रोमो लञ्च प्रेसमिटमा अभिनेता उप्रेती भने उपस्थित थिएनन् । निर्देशक हिमाल केसी, नायिका सारा शिर्पाली, निर्माता श्रीराम बराल लगायत टिम प्रेसमिटमा उपस्थित थिए । माघ ४ गते प्रदर्शन हुने पिंजडा..
न्यूयाेर्क (अमेरिका) : नेपाली चर्चित गायक राजेश पायल राईले अमेरिकामा अहिलेसम्म कै ठुलो सम्मान पाएका छन् । रोचेस्टरमा आयोजित कार्यक्रममा सिटीका मेयर लभ्ली वारेन र डाइरेक्टर डेपुटी मेयर डा. केर्डिक एल. अलेक्जन्डरले संयुक्त रूपमा सम्मानित गरेका हुन् । गायक राईलाई अमेरिकाको रोचेस्टर सिटी हलमा..
कार्तिक १५, २०७४-प्रेम यस्तो विषय हो, जो वर्तमान हुँदा त रमाइलो हुन्छ नै, विगत बन्दा पनि सबैलाई पीडादायक हुँदैन । जस्तो : प्रियंका चोपडालाई । यी बलिउड अभिनेत्री पूर्वप्रेमीप्रति अझै उस्तै आसक्ति देखाइरहेकी छन् । पूर्वप्रेमीको आफूकहाँ छुटेको ज्याकेट उनले अझै बेलाबेला लगाउने गरेकी रहिछन् । यस्तो..
मुम्बई । दुबईको वुर्ज पार्कमा भारतको सबैभन्दा महंगो चलचित्र ‘२.०’ को म्युजिक लञ्च गरिएको छ । यस कार्यक्रममा मात्र १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस चलचित्रको बजेट ४५० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । यो एसियाकै दोस्रो महंगो चलचित्र भएको भारतीय मिडियाले बताएका छन् । म्युजिक लञ्च कार्यक्रममा..
मामालाई केटि खोज्न भान्जाको साथ (भिडियो)
काठमाडौँ – दर्शकको रोजाइमा पर्न सफल हास्य टेली सिरीयल “गुलेली” भाग १६ केहि समय अगाडि मात्रै युट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको छ । हास्य क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्न सफल जोडी यादव देवकोटा (सरापे) र राजु कमेडी (रेम्बो) को मुख्य भुमिका रहेको छ । तुलसी मिडिया प्रा.लीको प्रस्तुतीमा सार्वजनिक भएको उक्त..
बुद्धका आफन्त र प्रहरीबिच एयरपोर्टमै झडप (भिडियो)
काठमाडौँ – पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामा नेपाल आइपुगेका छन् । उनलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने क्रममा विमानस्थलमा उनका आफन्त र प्रहरीबिच झडपको अवस्था सृजना भएको थियो । नेपाल आइडल एपी वान टेलिभिजन बाट प्रसारण भएको दर्शकको रोजाइमा पर्न सफल एक अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चराइज रियालिटी सो हो..
रास्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी देखि कलाकर माग्ने बुढाको क्यारीकेचर गरेर भाईरल बनेका हास्य कलाकार दिनेश काफ्लेको यस्तो छ दर्दनाक कथा(भिडियो)
काठमाडौ । नेपालमा पहिलोपल्ट रास्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको क्यारीकेचर गरेर कमेडियन दिनेश काफ्ले यतीखेर फेरि चर्चाको शिखरमा आएका छन् । इन्टरनेटमा १०० भन्दा बढी कलाकार र नेताको हुबहु अभिनय गरेर चर्चा कमाएका काफ्लेले नेपालकै सबैभन्दा सर्वोच्च पद धारण गर्ने रस्ट्रप्रमुख को क्यारीकेचर गरेका हुन्..
१०० जना नेता र कलाकारको क्यारीकेचर गरेका दिनेश काफ्लेले गरे नेपाल आईडलका जजलाई व्यंग्य प्रहार(भिडियो)
आशाका किरण समाचार । भदौ ३१-काठमाडौ |१०० भन्दा बढी ब्यक्तीको क्यारीकेचर गरेर एकाएक चर्चामा आएका दिनेश काफ्लेले फेरि व्यंग्य गर्दै चर्चामा आएका छन् । नेपाल आईडल्को लोकप्रियता बढेसंगै काफ्लेले समेत जज न्य्हु बज्राचार्यको क्यारीकेचर गर्दै दर्शकलाई तताएका थिए । बौद्धमा रहेको विट्स एकेडेमीमा भएको बधाई..
अमिर खानसँग किन डराउँछन् सलमान र शाहरुख ?
काठमाडौं, २७ भदौ । बलिउडमा तीन खान अर्थात सलमान शाहरुख र अमिर खानको दबदबा छ । तीन खान एक अर्काका प्रतिस्पर्धी समेत हुन् । त्यसमध्ये अमिर भने आफ्नो फिल्मको प्रचार अर्थात् मार्केटिङ यसरी गर्छन् कि बक्स अफिसका रेकर्ड समेत ताडिन्छन् । एक रिपोर्ट अनुसार अब आमिर खान अहिले डिस्ट्रिब्युटर बन्ने सोचमा रहेका..
अमेरिकामा के गर्दैछन् युवा स्टार ?
युवा स्टार अनमोल केसी यतिबेला अमेरिकामा छन् । पिता भुवन केसीसँग अवार्ड समारोहका लागि त्यहाँ गएका अनमोल दशैं अगाडी देश फर्किनेछन् । उनी त्यहाँ पारिवारिक सदस्यहरुसँग घुमफिर र भेटघाटमा व्यस्त छन् । नेपाल फर्किएपछि अनमोल ‘कृ’ को बाँकी छायाँकनमा व्यस्त हुनेछन् । अनमोल अभिनित चौथो बहुप्रतिक्षित फिल्म..